sharad on laambad globe galaas si ay u iftiimiyaan qolka fadhiga | Bezzia
Ku sharad nalalka galaaska globe si ay u iftiimiyaan qolka fadhiga
Maria vazquez | | Qalabka guriga
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu beddelan karo iftiinka qolka fadhiga laakiin kuwan waxaa ka mid ah mar walba qaar ka muuqda kuwa kale. Laambadaha dhalada u qaabaysan waa mid ka mid ah kuwa ugu cajiibsan. Markaa haddii aad rabto in nalalka si ay u noqdaan qayb muhiim ah qolka fadhiga, nalalka galaaska globe waa sharad aad u fiican.
Laambadahani waxay ku habboon yihiin meel kasta, laakiin gaar ahaan waxay iftiiminayaan deegaanka caadiga ah iyo kuwa casriga ah. Waxay qaadan karaan qaabab kala duwan; u dhaqmo sida chandelier ama u istaag si madaxbanaan oo leh goobo waaweyn. Ma ogtahay meesha ugu fiican ee mid kasta oo iyaga ka mid ah la dhigo qolkaaga fadhiga?
Ma fududa in la doorto nalka ugu habboon ee globe ee qolka fadhiga. Waxaa jirta sabab tan: naqshado kala duwan. Laakiin waxaan rajeyneynaa in sawirada maanta ay ku dhiirigelin doonaan oo ay kaa caawin doonaan inaad go'aan ka gaarto si degdeg ah. Haddii dhamaadka maqaalkan aadan hubin waxaad rabto, ugu yaraan waxaad ogaan doontaa inaadan rabin. Taasina, mararka qaarkood, waxay ku dhowdahay inay la mid tahay ta kowaad, miyaadan ogolayn?
1 Miiska qaxwada dushiisa
2 Goobta cuntada
3 Laambadaha sagxada ee fadhiga fadhiga agtiisa
Miiska qaxwada dushiisa
Ma doonaysaa inaad laambaddan dhigato badhtamaha qolka fadhiga, miiska qaxwada? Haddii aad rabto in laambaddani noqoto midda iftiimisa qolka fadhiga guud ahaan, waxa fiican inaad mid ku sharad gasho. laambad leh gacmo kala duwan taas oo soo dhawaynaysa aagga madadaalada iyo nasashada, oo ah tan ugu muhiimsan qolka.
Dhammaan nalalka kor ku xusan cutubkan waxay leeyihiin gacmo kala duwan iyo nalalka dhalada ah ee qaabka wareega haddana aad bay u kala duwan yihiin. Kuwa leh muuqaal qurux badan iyo goobo yaryar ayaa ku habboon qurxinta meelaha casriga ah iyo kuwa casriga ah, halka nalalka leh qaab nadiif ah ama ka badan oo la soo ururiyey iyo meelo dhexdhexaad ah oo ku habboon meelo badan oo muxaafid ah ama nasasho leh.
Mid ka mid ah meelaha ugu jecel in la dhigo laambadaha globe ee dhalada ah waa qolka cuntada. Haddii qolka fadhiga iyo qolka cuntada ay wadaagaan booska guriga oo aad rabto inaad soo jiidato dareenka dambe, ku dhejinta nalka noocaan ah miiska cuntada ayaa ku caawin kara. Ilays sida kuwa hore loo sheegay laakiin Laambadihiisu waxay ka sii fog yihiin saqafka oo u dhow miiska, iyada oo aan, dabcan, ka hortagaysa qadeeyayaasha inay si raaxo leh ula macaamilaan.
Sida qolka fadhiga waxaan raadinay iftiin guud oo dheeraad ah, qolka cuntada ayaa ku filan in iftiinku ku dhaco miiska. Haddii miiska uu aad u dheer yahay, ku haboon ayaa noqon lahaa in la dhigo laambad dheer ama sharad on a dhigay dhowr laambadood oo siman ee hal goob oo aad ku ciyaarto meelaha dhaadheer. Haddii ay wareegsan tahay, waxaan jecelnahay fikradda sharadka laambad leh dhidibo toosan oo keliya, laakiin meelo badan oo "cascading" ah.
Laambadaha sagxada ee fadhiga fadhiga agtiisa
Ilaa hadda waxaan ka hadalnay nalalka saqafka, laakiin sidoo kale way jiraan Laambadihii sagxada leh ee muraayadaha. Kuwanuna waxay ku fiican yihiin in la ag dhigo fadhiga fadhiga oo ay siiyaan iftiin dheeraad ah oo ku habboon goobtan si ay u awoodaan inay si raaxo leh wax u akhriyaan ama u abuuraan jawi aad u dhow.
Noocyada noocaan ah waxay guud ahaan leeyihiin qaab dhismeed leh dhammaystir dahab ah iyo ilaa saddex goobood oo cadcad. oo la dhigo meelo dhaadheer iyo jihooyin kala duwan. Ma aha nalal aad toosi karto, inkastoo ay sidoo kale jiraan kuwan sida aad ku arki karto labada sawir ee hore. Si ka duwan noocyada kale ee laambadaha taagan Kuwani waxay u baahan yihiin qaab-dhismeed sidan oo kale ah oo awood u leh inay taageeraan miisaanka qaybaha, sidaas darteed mar walba ma fududa in la helo nalal leh fursado badan oo qiimo fiican leh.
Laambadihii globe galaas ayaa ah, sidaad aragteen, door weyn oo lagu iftiiminayo qolka fadhiga. Waxaan kugula talineynaa inaad kaliya geliso mid ka mid ah noocaan oo kale qolka fadhiga, gaar ahaan haddii ay tahay naqshad leh meelo waaweyn, si aan loo badin. Waxa kale oo ay noqon doontaa qalab weyn oo lagu soo jiito dareenka geeskaas gaarka ah.
Ma jeceshahay nalalkan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Qalabka guriga » Ku sharad nalalka galaaska globe si ay u iftiimiyaan qolka fadhiga
baytariyada iyo baytariyada, dhibaato deegaanka
Keebaa marka hore la sameeyaa, cadayashada ilkaha ama xadhigga?